Myanmar Insurance | Myanmar Insurance , Insurance In Myanmar , Life Insurance in Myanmar
AIA Myanmar Insurance အကြောင်း
AIA Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် နိုင်ငံခြားသားပိုင် အသက် အာမခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ မှစတင်ခဲ့သည့် AIA သည် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသတွင်ထိပ်တန်း အထင်ကရအာမခံပေါ်လစီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ်ကြီးထွားလာသည်။ ...
IKBZ Insurance ၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ MS&AD Insurance Group ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (“MSI”) မှ နှစ်ဦးသဘော တူ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် ...
CB Insurance (အသက်အာမခံ လုပ်ငန်း) အကြောင်း
CB Insurance (အသက်အာမခံ လုပ်ငန်း) ဘဏ္ဍာရေး နှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (IBSB) သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ...
GGI နာမည်အား GGITM အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း
GGI နာမည်အား GGITM အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စ၍အာမခံလောထဲသို ဝင်ရောက်ခဲ့သော GGI သည် အာမခံလောကတွင် နာမည်ကောင်းဖြင့် ရပ်တည်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။၂၀၁၉ ခုနှစ်၌ GGI သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အာမခံလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော ...
AYA Sompo Insurance အကြောင်း
AYA Sompo Insurance သည် AYA MYANMAR Insurance နှင့် Sompo Japan Niooinkoa Insurance တို့မှ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အသိပညာများ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ...
Capital Life Insurance နှင့် Taiyo Life Insurance တို့ အကျိုးတူလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
Capital Life Insurance နှင့် Taiyo Life Insurance တို့ အကျိုးတူလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း Capital Life Insurance နှင့် ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်သည့် Taiyo Life Insurance သည် ၂၀၁၉ ...
Capital Life Insurance (မြို့တော်အသက်အာမခံ) အကြောင်း
Capital Life Insurance (မြို့တော်အသက်အာမခံ) ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံအတွင်း အာမခံလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အတွက်သော် လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အာမခံထားတတ်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်အတွက် သော်လည်းကောင်း ၊ ပါ၀င်ကူညီရန်အတွက် Capital ...
First National Insurance ( FNI) အကြောင်း
First National Insurance ( FNI)First National Insurance (FNI) ပထမအမျိုးသား အာမခံလုပ်ငန်းသည် ထူးကုမ္ပဏီလက်အောက်ရှိ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ FNI ကို အများပိုင် ကုမ္ပဏီအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးလိုင်စင်အမှတ်(NO.007) ကို ဇွန်လ ၁၄ ...
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ် အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သူ လုပ်ငန်းရှင်ဆုကို IKBZ Insurance မှရရှိ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ် အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သူ လုပ်ငန်းရှင်ဆုကို IKBZ Insurance မှရရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဇအာမခံလုပ်ငန်း (IKBZ Insurance) အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကြောင့် အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သူလုပ်ငန်းရှင်ဆု လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ...
GGI ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အယုံကြည်ရဆုံး အာမခံလုပ်ငန်းအဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက ရပ်တည်လာခဲ့တာပါ။GGI အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအာမခံစျေးကွက်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အာမခံလုပ်ငန်း တစ်ခုတင်မဟုတ်၊ နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tokio Marine နဲ့ Nippon Life ...
ယနေ့‌ဖော်ပြပေးမည် သတင်းလေးကတော့ Myanmar Insurance နယ်ပယ်အတွက် သတင်းထူးတစ်ရပ်လည်းဖြစ်၊အောင်မြင်မူတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ AIA Myanmar နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး Business group တွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ AYA Financial Group, Max Myanmar ...
Thanks To GPS Tracker
၂နာရီ အတွင်းမှာ ဆိုင်ကယ်သူခိုး ကိုပြန်ရှာတွေ့တာGPS Tracker လေးရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ဗျာ။===================================== လူကြီး မင်းတို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ ကား၊ဆိုင်ကယ် တို့ကို မျက်စိအောက်မှာ ပဲစောင့်ကြည့်ထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ GPS Tracker လေးတွေ တပ်ဆင်ထားသင့်‌‌ နေပါပြီနော်။(ခေတ်ကြီးကလည်းကောင်းတာမဟုတ်) ...
"သင့်ကိုယ်သင် ဂရုစိုက်သလို သင့်ကားကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပါပြီနော်"လေးက ဘယ်လိုတွေကူညီပေးမှာလဲ❔❔❔ ✔️ Online GPS Tracker ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ကားကိုမိုဘိုင်းဖုန်းမှ တဆင့်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကြည့်လို့ရပါမယ်။ ✔️ Online GPS မှာ MPT, Telenor SIM cardထည့်သုံးလို့ရပါတယ်။ ...
Why GPS Tracker
GPS tracker ကိုဘာကြောင့် သုံးသင့်ပြီလဲ? အကြောင်းအရင်းများကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်…. GPS Tracking စနစ်သည် မိတ်ဆွေတို့၏ မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ချင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကအားသာချက်များ ဖြစ်စေနိုင်သည်။GPS Tracking စနစ်ကို အသုံးပြုသင့်သော အကြောင်းအရာများ ...
Real Time Car DVR
ယာဉ်မောင်းတွေအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ CCTV လိုသုံးမလား၊ GPS Tracker လိုသုံးမလားအဆင်ပြေစေမယ့် Real Time Car DVR လေးပါ 150 ဒီဂရီ အတွင်းအပြင် မြင်ကွင်းကျယ် မြင်ရတဲ့အပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အရည်အသွေးနဲ့ဗွီဒီယိုများကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ...
Designed by HAS(intern) | Powered by DPS